‘အပူအပင်ကင်းတဲ့ ကလေးလေးဘဝကို တစ်ခါပြန်ပြီး ရချင်သေးတယ်’ 😥😥 | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Entertainment » ‘အပူအပင်ကင်းတဲ့ ကလေးလေးဘဝကို တစ်ခါပြန်ပြီး ရချင်သေးတယ်’ 😥😥
‘အပူအပင်ကင်းတဲ့ ကလေးလေးဘဝကို တစ်ခါပြန်ပြီး ရချင်သေးတယ်’ 😥😥
Posted by Mon Lay on Apr 23, 2019 in Entertainment, Health & Fitness, Photography, Sports & Recreation, Travel |0comments
ငယ်ငယ်တုန်းက ကြားခဲ့ဖူးတဲ့သီချင်းလေး..အဲ့အဓိပ္ပါယ်ကိုငယ်ငယ်တုန်းက ဘာမှန်းသေချာမသိခဲ့ပေမဲ့..ခုလို ၂ဝကျော်ပတ်လည်၊ အလုပ်တွေလုပ်၊ အိမ်ကိစ္စတွေဝိုင်းကူနဲ့ စိတ်ဖိစီးမှုများလာတဲ့အခါကျတော့ မှ ဒီသီချင်းရဲ့ အနှစ်သာရနဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကို ကောင်းကောင်းသိလာခဲ့ရပါတယ်။ ဘယ်တော့မှ လည်းပြန်မရနိုင်မှန်းလည်း အသက်တွေကြီးလာလေလေ တဖြည်းဖြည်းရိပ်မိလာခဲ့ပါတယ်။ 😣😣ဒါပေမဲ့ ကလေးဘဝ ကို နောက်တစ်ခေါက်ပြန်ရနိုင်မယ့် နေရာလေးတစ်ခုကို ကံကောင်းစွာနဲ့ပဲ မွန်လေး ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ ပါတယ်။ 💡 သူလေးကတော့ Happy World Amusement Zone ပါပဲ။ အဲ့ကို ဟိုးငယ်ငယ်လေးတုန်းက ဦးလေးတို့၊ အဒေါ်တို့လိုက်ပို့လို့ ရောက် ဖူးပြီးပေမယ့် ဘယ်နှစ်ကြိမ်သွားသွား အသက်သာကြီးလာတာ ငယ်ငယ်တုန်းက Happy World မှာမျောက်ရှုံးအောင်ဆော့ခဲ့သလို..ခုအသက်ကြိီးမှပြန်ရောက်တော့လည်း မျောက်ရှုံးအောင်ပြန်ဆော့တာပါပဲ။ 😃😃 အဲလောက်ကို ကလေးဘဝပြန်ရောက်သလို ခံစားမိတဲ့နေရာလေးကတော ့Happy World အပြင်မရှိတော့ဘူးထင်ပါတယ်။ ကဲဘယ်လိုလဲ..သွားချင်နေပြီဟုတ်?? 👈👈
ရွှေတိဂုံဘုရား တောင်ဘက်မုခ်၊ ဦးဥတ္တမပန်းခြံ ရန်ကုန်မြို့။ ဖုန်း 01-243434 / 01-375664
ကိုယ်ပိုင်ကားနဲ့ Taxi တို့နဲ့လာမယ်ဆို ဦးဝိစာရလမ်းဘက် ဂိတ် ရွှေဘဲ ကနေဝင်ပါ။ YBS နဲ့လာမယ်ဆို နံပါတ် (၁၁)တို့ ၊ဘုရားသွားတဲ့ကားတွေရောက် တယ်ပြောပါ တယ်။ ရွှေတိဂုံ ဘုရားတောင်ဘက်မုခ်မှတ်တိုင်မှာဆင်းပြီးအနောက်ဘက်ကိုဆက်လျှောက်လာရင် ဘယ်ဘက်ခြမ်းမှာပါ။ ဘုရားကနေဆိုတောင်ဘက်မုခ်ဘက်နေဆင်းလာလို့ရပါတယ်။
အဝင်ဝမှာတင် ကလေးတွေအကြိုက်ကို အပြည့်အဝဆွဲဆောင်ထားတဲ့ Avata ဇာတ်ကောင်ရုပ်တွေ၊ ဂေါ်ဇီလာအရုပ်တွေနဲ့ အလှဆင်ထားတာ။ကိုုယ်သွားခဲ့တုန်းကဆို ကလေးတွေပါ အတူ တကွပျော်ေျပျာ်ရွှင်ရွှင်ပါဝင်ဆော့ကစားလို့ရတဲ့ Game အစီ အစဉ်တွေ လုပ်ပေး နေတာတွေ ပါ တွေ့ခဲ့သေးတာ။ ကလေးတွေဆိုတာ ပျော်ကြအော်ကြနဲ့ပေါ့။ ကိုယ်တွေကလည်း လက်ခုပ်တီး အားပေးကြပေါ့။ 👏အထဲမဝင်ရသေးဘူး။ အဝင်ဝမှာတင်. .ပျော်ဖို့ကောင်းနေပြီနော်။
Buffet Ticket (game package) or Special Ticket 📣📣
တစ်ရက်သုံး အဝ ဆော့ကစားနိုင်ဖို ့Buffet Ticket ဆိုပြီး ဧပြီလ(30) ရက်နေ့ အထိ ရောင်းပေးနေပါတယ်တဲ့။ Buffet Ticket ကဘာလဲဆိုရင်တော့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ ကစားနည်းတွေကို တစ်နေကုန်အမုန်းဆော့၊ အဝဆော့၊ကြိုက်သလောက်ဆော့ လို့ရအောင် လုပ်ပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
လူကြီးတွေ အတွက်ဆို 🤷🤷‍♂️
မဝင်ဖူးသေးရင် ဝင်ဖြစ်အောင်ဝင်ကြည့်ပါ။ တခါမှ သရဲမမြင်ဖူးသေးရင်ပေ့ါနော်။
# သရဲရထား 🚃
သူက အောက်ထပ်မှာပါ။ ငယ်ငယ်ကစီးတော့လည်း အော်တာပဲ..ခုလည်းအော်တာပဲ
#3D အနုပညာပြတိုက် Art selfie 🧞‍♀️
ဝင်ဝင်ချင်း ညာဘက် မှာ။ အရင်နဲ့မတူ အသစ်အဆန်းတွေထည့်ပေးထားပါတယ်။ ပုံတွေကိုပဲကြည့်ပါလေ။ နိုင်ငံခြားအဆင့်မှီတယ်နော်။ ပုံလေးတွေတော့ 1ခုချင်းစီကြည့်ပေးနော်။
ကိုယ်အကြိုက်ဆုံးလေးပဲ။ ဘယ်နို်င်ငံမှာမှမရှိသေးဘူး။ ကိုယ်ရောက်ဖူး သမျှနိုင်ငံတွေ ထဲမှာ ပြောတာပါ။ သူကမြေအောက်ထပ်မှာ ရှိပါတယ်။ ဝင်္ကပါဆိုတဲ့ အတိုင်း လျှောက်သွား ရတာမျိုးပါ။ နံရံတွေကတော ့မှန်တွေနဲ့လုပ်ထားတာ။ ဘယ်တော့အပြင်ရောက်မှာလဲဆိုပြီး အသဲတထိတ်ထိတ်နဲ့သွားနေရတာမျိုးကပျော်စရာ။ 🙆
အပေါ်ကနေအကုန် ရှိုး လို့ရတယ်။ နေရာသာ ကျယ်ကျယ်ဝန်းဝန်းရခဲ့ရင် အရမ်းကို မိုက်မယ့် ရထားပါ။ ခုက indoor ထဲမှာပဲ အိုင်ဒီယာကောင်းကောင်းနဲ့ အသေအချာလုပ် ထား တာတွေ့ရပါတယ်။
သေးသေးလေးဆိုပြီးအထင်မသေးနဲ့နော် ..အရှိန်ပြင်းချက်က 9+ ဘန်ကောက်အဆင့်မှီတယ်
ဒါတွေအကုန်တစ်နေကုန် အကုန်စီး၊ အမုန်းစီးလို့ရပါတယ်။ Ticket 1 စောင် မှ 2000 ကျပ်တည်းရယ်။ စွန်းတန်နေတာရော။ 👍
စာမှာသင်ရသလို့ ရ ရထားကြီးပျေ်ာပျော်စီးလို့ရတယ်
#Sky Wheel 🎡
ကလေးတွေအတွက် ရေထဲမှာ လှေအပျေ်ာစီးလို့ရတယ်။ ထိန်းပေးမယ့်လူရှိလို့ စိတ်မပူနဲ့။
ကိုယ်ငယ်ငယ်တုန်းကအရမ်းကြိုက်ခဲ့တဲ့ဟာလေး။ မြင်းရုပ်လေးတွေပေါ်တက်စီးရတာလေ။ မြင့်လိုက်တက်လိုက်
#အကြွေစေ့ဂိမ်းတွေရှိတယ် (၁စေ့ကို 50ကနေစတယ်။ များများဝယ်ရင် အပိုတွေပါပေးသေးတာနော်။
#ဇိမ်ကျအောင် အနှိပ်ခံလို့ရတဲ့ အနှိပ်ခံစက်တွေရှိတယ်။
#Snow_Town အသေးစားလေးလည်းရှိပါတယ်။ ချစ်စရာပင်ကွင်းလေးတွေနဲ့ ဓါတ်ဖမ်းလို့ရတယ်။
#5D လည်းရှိတယ်။..မျက်မှန်တပ်ပြီး ကိုယ်ကြည့်ချင်တဲ့ဇာတ်လမ်းကိုရွေးပြီးကြည့်လို့ရတယ်။ မွန်လေးတို့ကတော့ မိသားစုသရဲရယ်..Roller coaster စီးတာရယ် ကြည့်ခဲ့ပါတယ်။
#မျက်လှည့်တို့၊ ♂️🤡🎇🔮 ကာတွန်းဇာတ်ကောင်တွေနဲ့ ကပြတာတို့လည်း 👯👯‍ စနေဆို နေ့လည်၂နာရီ ၁ချိန် ၊တနင်္ဂနွေဆို 12နာရီ ၁ချိန်နဲ့ နေ့ခင်း 2နာရီ ၁ချိန်ဆိုပြီး တစ်ပတ်မှာ 3ချိန်ပြပေးပါတယ်။ ဝင်ကြေး (၂၀၀) ပဲပေးပြီး အလကားကြည့်လို့ရတာနော်..ဘာမှမစီးဘဲနဲ့ ပြန်သွား ရင်တောင် တန်နေပြီ။ 🤗🤗
ဒါတောင်မဆုံးသေးဘူးနော် စီးစရာတွေက..များလွန်းလို့… သွားတဲ့အခါစီးခဲ့ကြနော်။
တချို့ကပြောကြမယ်။ ကစားဖို့အရွယ်မှ မဟုတ်တော့တာ ဘာလို့Happy world သွားရမှာလဲ မသွားချင်ပါဘူး လို့ မငြင်းလိုက်နဲ့နော်..လူကြီးတွေအတွက် ဒန်တန်… ကာရာအိုကေ အခန်းပါရှိသေးတယ် ဗျာ 🎤🎼🎵🎶 (၂ယောက်ခန်းကို 6000ကျပ်၊ 5ယောက်ခန်းကို 7000ကျပ်နဲ့ 10 ယောက်ခန်းကို 9000ကျပ်ပါ)…ကဲ.. ဘယ်လောက်မိုက် လိုက်လေသလဲ.. ကလေး အတွက် ပျေ်ာစေဖို့ လုပ်ပေးထားရုံမကဘူး. .လူကြီးတွေအတွက်ပါရှယ် လုပ်ပေးထားတာ။
ဒါ့အပြင် #ပျော ့ပျော ့အိအိရေကူးကန်လေး 🏊🏊‍♀️👙 ကလည်း ကလေးတွေပါမက လူကြီးတွေလည်းလာကူးလို့ရတယ်ဆိုတော့ ကိုယ်လိုရေကြိုက်တဲ့သူအတွက် သတင်းကောင်းလေ…တခါကူးမှ ၂၀၀ဝထဲရယ်.. ရေကူးဝတ်စုံမပါရင် လည်း ရေ ကူးဝတ်စုံငှားပါတယ်တဲ့။
ခုချိန်ဆို ကလေးတွေနွေရာသီကျောင်းပိတ်ရက်ဆိုတော့ မိဘတွေကလည်း ကလေးတွေကို ကစားဖို့ Happy World ကိုပို့ပေးသင့်တယ်နော်။ ကလေးဆိုတာ စာဖတ်ချိန်စာဖတ်ရမယ်။ နားချိန်နားချိန်ရမယ်.ကစားချိန်ကစားရမှာပဲလေ..မဟုတ်လား။အဲဒါမှ ပညာရေးမှာ ထူးချွန်တဲ့သူတွေဖြစ်လာမှာလေနော်။
ကိုယ်ဆိုနိုင်ငံခြားသွားရင် ရှော ့ပင်လုပ်ပြီးတာနဲ့ ကစားကွင်းပဲသွားတော့ တာ။ဘာလို့ဆို ပျော် စရာကောင်းတဲ့ကစားကွင်းက စိတ်အပန်းဖြေမှုကို ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်တယ်လေ။ ဒါပေမဲ့ သူတို့ကဝင်ကြေးခတင် မနည်းပေးရတာ။ ချကျ ရန်ကုန်မှာ ဈေးလည်းအသင့်အတင့်နဲ့ အစုံကစားလို့ရတဲ့ ကစားကွင်းရှိတာကြောင့် ပိုက်ဆံအကုန်ခံပြီး ဘယ်နို်င်ငံခြားသွားတော့မလဲ။ ကိုယ့်နိုင်ငံမှာပဲ အသားကုန်ကဲတော့မှာပေ့ါ။
ကဲ..ဒီတေ့ာ လန်းချင်ရင် Happy world.⛳🏹🏊 သာသွားလိုက်ပါတော့နော်..